Ahoana no Iarovan’Andriamanitra Antsika? | Manatòna
Hery Natao Hiarovana: ‘Andriamanitra no Aro ho Antsika’
1, 2. Inona no loza nananontanona ny Isiraelita, rehefa niditra ny faritr’i Sinay izy ireo tamin’ny 1513 T.K., ary ahoana no nampaherezan’i Jehovah azy ireo?
NANANONTANONA ny Isiraelita ny loza, rehefa niditra ny faritr’i Sinay izy ireo tamin’ny 1513 T.K. * Nampahatahotra ilay dia be hataon’izy ireo, satria hamakivaky tany “efitra lehibe sady mahatahotra, izay misy menaran’afo sy maingoka.” (Deoteronomia 8:15) Mety hisy firenena hanafika azy koa. Tamin’izany rehetra izany no nitondran’i Jehovah ny vahoakany. Ho afaka hiaro azy ireo ve izy?
2 Nampahery indrindra izao tenin’i Jehovah izao: “Hianareo efa nahita izay nataoko tamin’ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin’ny elatry ny voromahery ary ny nampankanesako anareo ho atỳ amiko.” (Eksodosy 19:4) Nampahatsiahivin’i Jehovah ny vahoakany fa nanafaka azy ireo tamin’ny Ejipsianina izy, ka toy ny hoe nampiasa voromahery mba hanavotra azy ireo. Misy antony hafa koa anefa anoharana ny fiarovan’Andriamanitra amin’ny “elatry ny voromahery.”
3. Nahoana ny “elatry ny voromahery” no mety mba hanoharana ny herin’i Jehovah?
3 Tsy mba hanidinana fotsiny no ampiasan’ny voromahery ny elany, izay mahatratra roa metatra mahery, rehefa mivelatra. Velariny koa ny elany, rehefa mafana ny andro, mba hanakonana ireo zanany madinika tsy ho main’ny masoandro. Rakofany amin’ny elany koa, indraindray ny zanany, mba tsy ho tratran’ny rivotra mangatsiaka. Toy ny fiarovan’ny voromahery ny zanany no iarovan’i Jehovah ny firenen’ ny Isiraely vao niforona. Afaka nialoka hatrany teo ambany elany mahery izy ireo tany an’efitra, raha tsy nivadika taminy. (Deoteronomia 32:9-11; Salamo 36:7) Afaka manantena ny harovan’Andriamanitra ve anefa isika?
Nampanantena ny hiaro Andriamanitra
4, 5. Nahoana isika no afaka matoky tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah hiaro antsika?
4 Tena afaka miaro ny mpanompony i Jehovah. “Andriamanitra Tsitoha” izy, ka midika izany fa tsy voatohitra ny heriny. (Genesisy 17:1) Toy ny onjan-dranomasina ny herin’i Jehovah, ka tsy ho voasakan’iza na iza. Mahavita izay rehetra tiany hatao izy, ka mety hanontany isika hoe: ‘Sitrapon’i Jehovah ve ny mampiasa ny heriny hiarovana ny vahoakany?’
5 ‘Eny’ no valin’izany! Mampanantena ny hiaro ny vahoakany i Jehovah. Hoy ny Salamo 46:1: “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy.” Afaka matoky tanteraka ny fampanantenan’Andriamanitra fiarovana isika, satria “tsy mahay mandainga” izy. (Titosy 1:2) Andeha isika handinika ny sasany amin’ireo fomba anoharan’i Jehovah ny fiarovany antsika.
6, 7. a) Ahoana no tsy maintsy niarovan’ny mpiandry ondry ny ondriny, tamin’ny andron’ny Baiboly? b) Ahoana no anoharan’ny Baiboly ny fanirian’i Jehovah hiaro sy hikarakara ny ondriny?
6 Mpiandry ondry i Jehovah, ary “olony sy ondry fiandriny” isika. (Salamo 23:1; 100:3) Vitsy ny biby tsy afaka miaro tena toy ny ondry. Tsy maintsy ho olona sahy ny mpiandry ondry tamin’ny andron’ny Baiboly, satria tsy maintsy niaro azy ireo tamin’ny liona, amboadia, orsa, ary ny mpangalatra. (1 Samoela 17:34, 35; Jaona 10:12, 13) Tsy maintsy nampihantaina koa anefa indraindray ny ondry narovana. Mety ho tsy tao anaty vala, ohatra, no niterahan’ny ondry iray ny zanany. Ilay mpiandry ondry amin’izay no hiaro an’ilay reny mandritra ny fotoana iterahany, ary avy eo kosa handray ilay ondrikely sy hibata azy ho ao amin’ilay vala.
“Hotrotroiny eo an-tratrany ireny”
7 Mampitaha ny tenany amin’ny mpiandry ondry i Jehovah, mba hanomezan-toky antsika fa tena maniry hiaro antsika izy. (Ezekiela 34:11-16) Tadidio ny fomba ilazan’ny Isaia 40:11 an’i Jehovah, noresahina tao amin’ny Toko 2 amin’ity boky ity: “Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry Izy; ny sandriny no hanangonany ny zanak’ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny.” Ahoana no hahatongavan’ilay ondrikely eny ‘an-tratran’ny’ mpiandry azy, izany hoe eny amin’ilay lamba miaraka amin’ny akanjony ambony? Manatona an’ilay mpiandry angamba izy, na mandona ny tongony mihitsy. Tsy maintsy miondrika mandray an’ilay ondry anefa ilay mpiandry, ka mametraka tsara ilay ondry ho eo an-tratrany. Hita amin’izany tokoa fa tena vonona hiaro antsika ilay Mpiandry Lehibe tia antsika!
8. a) Iza no arovan’i Jehovah, ary inona no lazain’ny Ohabolana 18:10 momba izany? b) Inona no dikan’ny hoe mialoka amin’ny anaran’Andriamanitra?
8 Misy fepetra anefa ny fiarovan’i Jehovah, satria ireo manatona azy ihany no arovany. Hoy ny Ohabolana 18:10: “Ny anaran’i Jehovah dia tilikambo mafy; ny marina miezaka ho ao aminy ka voavonjy.” Nisy tilikambo fialofana naorina tany an’efitra, indraindray, tamin’ny andron’ny Baiboly. Anjaran’ny olona anefa ny nifidy handositra sy hitady fialofana tany amin’ireny tilikambo ireny. Toy izany koa ny mialoka amin’ny anaran’Andriamanitra. Tsy ampy ny mamerimberina manonona ny anaran’Andriamanitra, satria tsy misy fahagagana ateraky ny fanaovana izany. Tokony hofantarintsika kosa ilay Mitondra io anarana io, ary tokony hanaraka ny fitsipiny marina isika. Tena tsara fanahy i Jehovah, ary mampanantena fa ho tilikambo fiarovana antsika izy, raha mino sy manatona azy isika!
“Andriamanitra ... dia mahavonjy anay”
9. Nahoana isika no afaka milaza fa tsy fampanantenana fiarovana fotsiny no nataon’i Jehovah?
9 Tsy fampanantenana fiarovana fotsiny no nataon’i Jehovah. Nasehony tamin’ny fahagagana, tamin’ny andron’ny Baiboly koa, fa afaka miaro ny vahoakany izy. Matetika no nampandositra ny fahavalon’ny Isiraely ny ‘tanana’ maherin’i Jehovah. (Eksodosy 7:4) Nisy olona narovan’i Jehovah koa anefa.
10, 11. Inona avy no ohatra ao amin’ny Baiboly mampiseho ny fomba nampiasan’i Jehovah ny heriny mba hiarovany olona?
10 Tsy nety niankohoka tamin’ilay sariolona volamena nataon’i Nebokadnezara ireo tanora hebreo telo lahy, dia i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Nilaza ilay mpanjaka fa hatsipiny ao anaty lafaoro mahamay be izy ireo. “Iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin’ny tànako izany?”, hoy i Nebokadnezara, ilay mpanjaka natanjaka indrindra tamin’izany. (Daniela 3:15) Natoky tanteraka izy telo lahy fa nanana hery hiarovana azy ireo ny Andriamaniny, nefa tsy nilaza izy ireo hoe tsy maintsy hiaro azy ireo Izy. (Daniela 3:17, 18) Tsy nanahirana an’ilay Andriamanitra mahery indrindra tokoa, na dia io lafaoro nohafanaina impito noho ny mahazatra io aza. Niaro azy telo lahy i Jehovah, ka voatery niaiky ilay mpanjaka hoe: “Tsy misy andriamani-kafa mahavonjy tahaka izao.”—Daniela 3:29.
11 Nasehon’i Jehovah tsara koa fa manana hery hiarovana izy, rehefa nafindrany ho ao an-kibon’ny virjiny jiosy natao hoe Maria ny ain’ilay Zanany lahitokana. Nisy anjely nilaza tamin’i Maria fa “hitoe-jaza [izy] ka hiteraka zazalahy.” Hoy ilay anjely: “Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin’ny Avo Indrindra hanaloka anao.” (Lioka 1:31, 35) Toa tamin’io fotoana io no notandindomin-doza indrindra ilay Zanak’Andriamanitra. Hanimba azy ve ny ota sy ny tsy fahalavorarian’ilay reniny? Ho afaka handratra na hamono an’io Zanaka io ve i Satana, alohan’ny hahaterahan’izy io? Tsy hisy mihitsy izany! Nanaloka, na niaro an’i Maria i Jehovah, mba tsy hisy na inona na inona hanimba an’ilay zaza vao nanomboka nisy tao an-kibony, na tsy fahalavorariana izany, na herin’ny ratsy, na mpamono olona, na izay mety ho demonia. Mbola narovan’i Jehovah koa i Jesosy, nandritra ny fahatanorany. (Matio 2:1-15) Tsy nisy afaka nikasika an’io Zanany malala io, raha tsy tonga ny fotoana voatondrony.
12. Nahoana i Jehovah no niaro tamin’ny fomba mahagaga, olona sasany tamin’ny andron’ny Baiboly?
12 Nahoana i Jehovah no niaro olona tamin’ny fomba mahagaga toy izany? Matetika dia satria nisy zava-dehibe kokoa narovany, dia ny fahatanterahan’ny fikasany. Nilaina, ohatra, ny fahaveloman’i Jesosy, mba hahatanterahan’ny sitrapon’Andriamanitra izay hahasoa ny olombelona rehetra. Voasoratra ao amin’ny Soratra Masina ny tantara mampiseho ny fampisehoan’i Jehovah ny heriny mba hiarovana, mba “ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin’ny faharetana sy ny fiononana avy amin’ny Soratra Masina.” (Romana 15:4) Manatanjaka ny finoantsika an’ilay Andriamanitra mahery indrindra ireny ohatra ireny. Inona anefa no karazana fiarovana antenaintsika avy amin’Andriamanitra?
Tsy voatery hiaro amin’ny fomba mahagaga i Jehovah
13. Tsy maintsy manao fahagagana ve i Jehovah mba hiarovana antsika? Hazavao.
13 Mampanantena ny hiaro antsika Andriamanitra, nefa tsy voatery hiaro antsika amin’ny fomba mahagaga izy. Tsy mampanantena antsika izy hoe tsy hahita zava-manahirana mihitsy isika, eto amin’ity tontolo ity. Misy mpanompony mahatoky maro tena sahirana, angamba satria mahantra, na noho ny ady sy aretina ary fahafatesana. Efa nilaza mazava tamin’ny mpianany i Jesosy fa mety hovonoina noho ny finoany izy ireo. Izany no antony nanantitranterany fa zava-dehibe ny miaritra hatramin’ny farany. (Matio 24:9, 13) Raha hamonjy ny rehetra amin’ny fomba mahagaga foana i Jehovah, dia ho afaka hihantsy an’i Jehovah i Satana sady ho afaka hiteny fa tsy tena tia an’Andriamanitra isika.—Joba 1:9, 10.
14. Inona avy no ohatra mampiseho fa tsy mitovy ny fomba iarovan’i Jehovah ny mpanompony?
14 Tsy voatery ho narovan’i Jehovah tsy ho faty daholo ny mpanompony tamin’ny andron’ny Baiboly. Novonoin’i Heroda, ohatra, i Jakoba apostoly, tamin’ny taona 44, nefa ‘novonjena tamin’ny tanan’i Heroda’ i Petera, taoriana kelin’izay. (Asan’ny Apostoly 12:1-11) Mbola ela velona kokoa noho i Petera sy Jakoba i Jaona, rahalahin’i Jakoba. Mazava fa tsy azontsika antenaina hitovy foana ny fomba iarovan’i Jehovah ny mpanompony. Mety hanjo antsika rehetra koa ny “fotoana sy ny sampona.” (Mpitoriteny 9:11) Ahoana àry no iarovan’i Jehovah antsika?
Afaka miaro antsika tsy ho faty i Jehovah
15, 16. a) Inona no porofo fa arovan’i Jehovah ny mpanompony amin’ny fitambarany? b) Nahoana isika no matoky fa hiaro ny mpanompony i Jehovah, dieny izao sy mandritra ny “fahoriana lehibe”?
15 Hofakafakaintsika aloha ny momba ny fiarovana tsy ho faty. Afaka manantena isika mpivavaka amin’i Jehovah fa arovany isika amin’ny fitambarany. Ho mora rembin’i Satana isika, raha tsy izany. Ny zavatra tena tian’i Satana, “andrianan’izao tontolo izao”, hatao dia ny hanafoana ny fivavahana marina. (Jaona 12:31; Apokalypsy 12:17) Nisy fitondrana natanjaka be nandrara ny asa fitoriantsika sy saika handripaka tanteraka antsika. Nijoro tsara sy tsy nitsahatra nitory mihitsy anefa ny vahoakan’i Jehovah! Nahoana ireo firenena natanjaka no tsy nahavita nampijanona ny asan’ireo Kristianina toa vitsy sy tsy manam-piarovana ireo? Satria niaro antsika teo ambany elany mahery i Jehovah!—Salamo 17:7, 8.
16 Hiaro antsika tsy ho faty ve i Jehovah mandritra ny “fahoriana lehibe” ho avy? Tsy misy tokony hatahorantsika ny didim-pitsarany, satria “fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin’ny fakam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin’ny fijaliana ho amin’ny andro fitsarana.” (Apokalypsy 7:14; 2 Petera 2:9) Misy zavatra roa azontsika antoka anefa, alohan’izay. Voalohany, tsy havelan’i Jehovah ho fongotra tanteraka ny mpanompony mahatoky. Faharoa, homeny valisoa ireo tsy mivadika aminy, ka homeny fiainana mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao, ary hatsangana amin’ny maty ny sasany, raha ilaina izany. Tsy misy toerana tsara kokoa ho an’ireo maty, noho ny ao anaty fitadidian’Andriamanitra.—Jaona 5:28, 29.
17. Ahoana no iarovan’i Jehovah antsika amin’ny alalan’ny Teniny?
17 Miaro antsika amin’ny alalan’ny ‘Teniny’ koa i Jehovah. Manana hery manasitrana ny fo sy manatsara fiainana izy io. (Hebreo 4:12) Mety ho voaro isika, raha mampihatra ny toro lalan’izy io. “Izaho, Jehovah Andriamanitrao, no mampianatra anao hahita soa”, hoy ny Isaia 48:17. Ho salama kokoa isika ary ho lava ny androm-piainantsika, raha arahintsika izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra. Manoro hevitra antsika, ohatra, ny Baiboly, mba hifadiantsika ny fijangajangana sy hanesorantsika izay fahalotoana rehetra. Halavirintsika, noho izany, ny fanao mandoto sy ny fahazarana mahafaty ny olona tsy tia an’Andriamanitra. (Asan’ny Apostoly 15:29; 2 Korintiana 7:1) Ankasitrahantsika tokoa ny fiarovan’ny Tenin’Andriamanitra antsika!
Miaro antsika amin’ny lafiny ara-panahy i Jehovah
18. Inona no dikan’ny hoe miaro antsika amin’ny lafiny ara-panahy i Jehovah?
18 Zava-dehibe indrindra ny hoe miaro antsika amin’ny lafiny ara-panahy i Jehovah Andriamanitsika be fitiavana. Miaro antsika tsy ho tratran’ny loza ara-panahy izy, ka manome izay ilaintsika mba hiatrehana fisedrana sy hiarovana ny fifandraisantsika aminy. Miezaka hiaro ny aintsika àry izy, mba hiainantsika mandrakizay mihitsy. Ireto misy fomba ampiasain’Andriamanitra mba hiarovana antsika amin’ny lafiny ara-panahy.
19. Hazavao ny fomba anampian’ny fanahin’i Jehovah antsika hiatrika fisedrana.
19 “Mpihaino vavaka” i Jehovah. (Salamo 65:2) Hamelombelona antsika ny famborahana izay ao am-pontsika aminy, rehefa mavesatra loatra ny adim-piainana. (Filipiana 4:6, 7) Mety tsy hesoriny amin’ny fomba mahagaga ilay fisedrana, saingy mety homeny fahendrena hiatrehana azy ireny kosa isika, ho valin’ny vavaka nataontsika. (Jakoba 1:5, 6) Manome ny fanahiny masina ho an’izay mangataka aminy koa i Jehovah. (Lioka 11:13) Manampy antsika hiatrika ny fisedrana sy olana mianjady amintsika io fanahy mahery io. Afaka manome antsika ‘hery be’ hiaretana izy io, mandra-panalan’i Jehovah ny olana rehetra ao amin’ilay tontolo vaovao efa tena akaiky.—2 Korintiana 4:7.
20. Ahoana no mety hisehoan’ny fiarovan’i Jehovah amin’ny alalan’ireo mpiara-mivavaka amintsika?
20 Mety ho amin’ny alalan’ireo mpiara-mivavaka amintsika, indraindray, no anehoan’i Jehovah ny heriny mba hiarovana. Natambatr’i Jehovah ho anisan’ny fianakavian’ny ‘mpirahalahy’ maneran-tany ny vahoakany. (1 Petera 2:17; Jaona 6:44) Hitantsika amin’ny fifankatiavan’ireo mpirahalahy ireo fa manana hery hitaomana ny olony hanao zavatra tsara ny fanahin’Andriamanitra. Io fanahy io no miteraka vokatra tsara ao amintsika, dia toetra tsara sy sarobidy toy ny fitiavana sy hatsaram-panahy ary fanaovan-tsoa. (Galatiana 5:22, 23) Afaka misaotra an’i Jehovah àry isika, rehefa misy manoro hevitra antsika na mampahery antsika, rehefa ao anatin’ny fahoriana isika. Fomba isehoan’ny herin’i Jehovah nataony hiarovana mantsy izany.
21. a) Inona ny sakafo ara-panahy omen’i Jehovah amin’ny alalan’ny “mpanompo mahatoky sy manan-tsaina”? b) Inona avy no soa noraisinao avy tamin’ireo fomba iarovan’i Jehovah antsika?
21 Manome zavatra hafa mba hiarovana antsika koa i Jehovah, dia ny sakafo ara-panahy tonga amin’ny fotoana ilana azy. Naniraka ny “mpanompo mahatoky sy manan-tsaina” i Jehovah mba hanome sakafo ara-panahy hahazoantsika tanjaka avy amin’ny Teniny. Mampiasa fitaovana isan-karazany io mpanompo mahatoky io, ka anisan’izany Ny Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! Ao koa ireo fivoriana sy fivoriambe manome antsika “hanina amin’ny fotoana” ilantsika azy indrindra. (Matio 24:45) Efa nisy ve valin-teny tany am-pivoriana na lahateny na vavaka tena nanome ilay hery sy faharisihana nilainao indrindra? Tsy efa nisy lahatsoratra tao amin’ireo gazetintsika ve tena nahakasika anao mihitsy? Tadidio fa nataon’i Jehovah hiarovana antsika amin’ny lafiny ara-panahy izany rehetra izany.
22. Ahoana foana no ampiasan’i Jehovah ny heriny, ary nahoana izany no tena mahasoa antsika?
22 Tena “ampingan’izay rehetra mialoka aminy” i Jehovah. (Salamo 18:30) Fantatsika fa tsy mampiasa ny heriny mba hiarovana antsika amin’ny loza izy izao. Ampiasainy hanatanterahana ny fikasany foana anefa ny heriny nataony hiarovana. Tena hahasoa ny vahoakany foana ny fiafaran’izany. Homen’i Jehovah fiainana lavorary mandrakizay isika raha manatona azy sy mitoetra amin’ny fitiavany. Ho azontsika heverina ho ‘maivana sy vetivety foana’ ny fahoriana manjo antsika ankehitriny, raha mitadidy izany fanantenana izany isika.—2 Korintiana 4:17.
^ feh. 1 Ny hoe T.K. dia midika hoe “Talohan’i Kristy.”
Salamo 23:1-6 Ahoana no iarovan’i Jehovah, Mpiandry Lehibe, sy ikarakarany ny vahoakany, toy ny ondry?
Salamo 91:1-16 Ahoana no iarovan’i Jehovah antsika tsy ho faty ara-panahy, ary inona no tsy maintsy ataontsika mba hiarovany antsika?
Daniela 6:17-23, 26-28 Ahoana no nampianaran’i Jehovah ny mpanjaka iray fahiny momba ny heriny nataony hiarovana? Inona no azontsika ianarana avy amin’izany?
Matio 10:16-22, 28-31 Inona no fanoherana tokony hampoizintsika, nefa nahoana isika no tsy tokony hatahotra ny mpanohitra?
Hizara Hizara Hery Natao Hiarovana: ‘Andriamanitra no Aro ho Antsika’